”पिडित छन् ओली बा”मेरा विरुद्ध लाग्यो भारत भन्दै प्रधानमन्त्री बने दुखी, के हो वास्तविकता ? – Sandesh Munch
”पिडित छन् ओली बा”मेरा विरुद्ध लाग्यो भारत भन्दै प्रधानमन्त्री बने दुखी, के हो वास्तविकता ?
June 30, 2020 124
काठमाडौ, १५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर नभएको बताएका छन्। मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा छापेवापत कसैले यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने दिवा सपना नदेख्न समेत चेतावनी दिए।
भारतीय मिडिया, भारतमा भइरहेका वौद्धिक वहस हेर्दा भारतको राज्य संयन्त्र कसरी सक्रिय छ भन्ने देखिएको उनले बताए। उनले आफु पदबाट हटेको दिन नेपालका लागि बोल्ने कोही नहुने बताए। उनले आफ्ना लागि नभएर देशका लागि पदमा बसेको बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
Prevयस्तो नरपिचासलाई के बन्नु हुन्छ प्रतिक्रिया पाउ छोराको मृत्युपछि बुहारीमाथी ससुराको गिद्धेनजर, सासु, ससुरा र नन्द मिलेर विभत्स हत्या गरेको निष्कर्ष
Nextताजा खबर>>साउदीमा नेगेटिभ, खोटाङमा पोजेटिभ ! रुपाकोटमा सिलबन्दी
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83199)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10101)